Enweghị ike ịme ihe ngosi na Prepar3D v4. Enwere m ozi njehie mgbe m mepeere P3D
Ndị ọrụ nke ọhụrụ Prepar3D v4: Na-agbaso mgbanwe nke charset na Scenery.cfg na UTF-16LE ndị na-akpaghị aka na-enweghị ike ime ka ebe obibi gị na-akpaghị aka.
Ihe ngwọta nwa oge: Mepee folda C: \_ ProgramData \_ Lockheed Martin \_ Prepar3D v4 wee mepee faịlụ Scenery.cfg na Notepad wee pịa File - Chekwaa ... Na windo nke mepere emepe họrọ UTF-8 na mpaghara Encoding (lee onyinyo n'okpuru) wee pịa Save.
Tinyegharịa ihe ngosi na voila.
A ghaghị imezigharị ihe a maka ebe obibi ọ bụla maka na P3D na-echekwa faịlụ Scenery.cfg na UTF-16LE mgbe ọ bụla mmeghe.
A gbakwunyere ihe omimi mgbe September 6 gasịrị, mbipụta a adịghị emetụta 2017.
Anyị na-emelite onye nlele akpaka nke ọ bụla ihu ọma, nsogbu a ga-edozị n'oge na-adịghị anya, ma na-ewe oge.